ကိုယ္နဲ႔ျပတ္ၿပီး မၾကာခင္ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ဘာေၾကာင့္ လက္ထပ္သြားတာလဲ..? by popolay.com
26 Sep 2019 905 Views
ချစ်သူနှစ်ယောက် လမ်းခွဲပြတ်စဲသွားတာမှ မကြာသေးဘူး သူက နောက်ထပ်ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ တွဲပြီး မကြာပါဘူး လက်ထပ်သွားကြတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ ကြုံဖူး၊ ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် မကြုံဖူးရင်တောင် ပရိသတ်ချစ်တဲ့ အနုပညာရှင် ဆယ်လီတွေရဲ့ အလားတူ အဖြစ်မျိုးတွေကို ကြားဖူကြပါလိမ့်မယ်။ တစ်ကယ်တမ်းကျတော့ မိန်းကလေးတွေအတွက် ဒီကိစ္စမျိုးက ခံပြင်းဖို့ကောင်းလှပါတယ်။
ကိုယ်ကတော့သူနဲ့ အချိန်တွေအကြာကြီး အနားမှာနေပေးခဲ့ပေမယ့် လက်ထပ်လက်စွပ်က ကိုယ့်အတွက်ဖြစ်မလာပဲ နောက်တစ်ယောက်ကိုကျတော့ ဘာလို့ ချက်ခြင်းကြီး ကောက်ကာငင်ကာ လက်ထပ်လိုက်ကြတာလဲ..?
သူလက်ထပ်သွားတဲ့ တစ်ယောက်က ကိုယ့်ထက်ဘာတွေများ ပိုသာနေလို့လဲ..?
မေးချင်စရာ မေးခွန်းတွေက အများကြီး အများကြီးပါ..။
ဒီမေးခွန်းအတွက် အဖြေရဖို့ “ပိုပိုလေး” ကနေ ယောက်ျားတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ သဘောသဘာဝတွေကို အနီးစပ်ဆုံး သဘောပေါက်လွယ်အောင် ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကို သိသွားပြီဆိုရင်တော့ သူကိုယ့်ကို ဘာလို့ထားသွားခဲ့တာလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေက ရှင်းသွားမှာပါ..
၁။ အကြာကြီးတွဲတာနဲ့ လက်ထပ်တာ ဘာမှမဆိုင်ဘူး
“ယောက်ျားတွေဟာ သူတို့ချစ်တဲ့သူကို တွေ့တာနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုတာမျိုးမဟုတ်ပဲ၊ သူတို့ဘက်က မိသားစုဘဝတစ်ခု စဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလို့ ခံယူမှ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့သူတွေပါ” လို့ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ တစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အမြင်ကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဒီပို့စ်ကိုနောက်တစ်ယောက်က တွေ့သွားပြီး ‘အဲဒါ အမှန်ပဲလား..? အမျိုးသားတွေ ကွန်မန့် ပေးကြပါ’ လို့ ဆွပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ပိုစ့်ရဲ့အောက်မှာ နာမည်အစစ်တွေနဲ့ မဟုတ်ပဲ အမျိုးသားတွေ လာပြီးကွန်မန့်တွေ ရေးကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ ယောက်ျားအများစုက သူတို့ချစ်မိခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ရတာကို တစ်ကယ်နောင်တရမိတယ်လို့ ဝန်ခံထားကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတို့နဲ့ သင်တော်မယ့် နောက်ထပ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံတဲ့အခါမှာတော့ လက်ထပ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။
တစ်ကယ်တော့ မိန်းကလေးတွေ ကိုယ်၌က လက်ထပ်ချင်တယ်ဆိုရင် လက်ထပ်ဖြစ်အောင် ယောက်ျားလေးတွေကို ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ တိုက်တွန်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီကိစ္စကို မိန်းကလေးက စရမှာလား..? ဈေးကျတယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆဟောင်းကြီး ဖက်တွယ်မထားပါနဲ့။ အရေးကြီးတာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ တစ်သက်လုံး အတူနေသွားရဖို့ပဲ မဟုတ်လား။
သူတို့တွေကလည်း အကြာကြီးတွဲလာတဲ့ ချစ်သူနဲ့ပဲ လက်ထပ်ချင်ကြမှာပါ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတွေဘက်က အရိပ်အယောင်မပြတဲ့အခါ အတွေးတွေများလာတတ်ပါတယ်။
“သူငါ့ကို မယူချင်သေးလို့လား၊ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးလို့ထင်ပါတယ်” စသည်ဖြင့်ပေါ့။
တစ်ကယ်တော့ ယောက်ျားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို စောင့်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူး၊ သူတို့ဘက်က လက်ထပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့ အချိန်ကိုက်မှာ အနားနားမှာလည်း အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ လက်ထပ်ဖြစ်သွားကြတာ များပါတယ်။
သုတေသီတွေရဲ့ အဆိုအရ အိမ်ထောင်ပြု(မိသားစုဘဝကိုထူထောင်)ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်က အသက် ၂၈ နဲ့ ၃၂ နှစ်ကြားလို့ ဆိုပါတယ်။ အမျိုးသားတွေဟာ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ အိမ်ထောင်ပြုချင်စိတ်က လျော့လာပြီး အသက် ၄၂ နှစ်နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ သူတို့ဘက်က လက်ထပ်ခွင့်တောင်းမယ့် အခွင့်အရေးက သုည ဖြစ်သွားပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
၂။ လှတာမက်ရင် ညစာခက်မယ် ဆိုတာ သူတို့ တစ်ကယ်ယုံတယ်
“လှတာမက်ရင် ညစာခက်မယ်” ဆိုတဲ့ ရှေးလူကြီးစကားကို ယောက်ျားလေးတွေ ရာခိုင်နှုန်းအတော်များများက ယုံကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လှတာမလိုချင်ဘူးလားဆိုတော့လဲ လိုချင်ကြပြန်ပါတယ်။
သုတေသနပြုထားချက်အရ အမျိုးသမီးက အမျိုးသားထက် ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ စုံတွဲတွေရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ အသာယာဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ဟီရိသြတ္တပ ကင်းမဲ့တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့တော့ စွဲဆောင်တာမျိုး မဖြစ်သင့်ဖူးလို့ အိမ်ထောင်ရေးစာပေတွေရေးသားနေတဲ့ စာရေးဆရာ John T,Molloy က ဆိုပါတယ်။
သူဟာ အမျိုးသား ၃၅၀၀ ကျော်ကို သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်လောင်းဖြစ်လာမယ့် အမျိုးသမီးတွေအကြောင်း အင်တာဗျူးကြည့်တဲ့အခါမှာ အမျိုးသား ၂၀% လောက်ကပဲ သူတို့ကောင်မလေးတွေကို ဆက်ဆီကျတယ်၊ စွဲဆောင်မှုရှိတယ်၊ အရမ်းမိုက်တယ် စသည်ဖြင့် တင်စားပြောဆိုကြပြီး ကျန်တဲ့ ၈၀% ကတော့ သူတို့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထား ခံယူချက်တွေကို ဦးစားပေးပြောခဲ့ကြကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ယောက်ျားတွေဟာ သူတို့တွေ့ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ကို အရမ်းကြီး လှပကျော့ရှင်းနေရမယ် ဆိုတာထက် ဖြူစင်သန့်ရှင်းရမယ် နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းရမယ်၊ လူပုံအလယ်မှာ သူတို့အရှက်မကွဲရတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်ဖို့လောက်ပဲ မျှော်လင့်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ မိဘတွေ အပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကလည်း သက်ရောက်တယ်
အမျိုးသားတွေဟာ ဘယ်လောက်ပဲ သူ့တို့ကိုယ် သူတို့ပိုင်တယ်၊ ကိုယ့်ဟာကို ရပ်တည်နိုင်တယ် ပြောပြော သူတို့ရဲ့အနားမှာ ရှိတဲ့ မိဘဆွေမျိုးသော်၎င်း၊ အပေါင်းသင်းထဲကသော်၎င်း တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကတော့ ရှိနေတတ်စမြဲပါပဲ။
ဒီတော့ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားရွေးချယ်တဲ့ နေရာမှာ အဲဒီတစ်ယောက်ရဲ့ သက်ရောက်မှုက ရှိနေတတ်တယ်။ အထူးသဖြင့် သူ့ရဲ့ မိဘဆွေမျိုး သဘောထားတွေကလည်း လက်ထပ်ဖို့အရေးမှာ အရေးပါကောင်း ပါနေပါလိမ့်မယ်။
၄။ ကိုယ့်ကြောင့်ပဲ နောက်လူကောင်းစားသွားတယ်
ယောကျ်ားလေးဘက်က လက်မထပ်ချင်သေးလို့ တစ်ခါတစ်ရံ မိန်းကလေးတွေဘက်က အလိုက်တသိ (သူစိတ်ဆင်းရဲမှာစိုးလို့) အဆင်ပြေချင်ယောင်ဆောင်ပြီး နေပေးလိုက်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။
ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့၊ တစ်ကယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘက်က လက်ထပ်ချင်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း တစ်နည်းနည်းနဲ့ သိအောင် လုပ်ပါ၊ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ သူ့ဘက်က ဘယ်တော့မှ သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ “ဪ.. သူလည်း ငါ့လိုပဲ လက်ထပ်ဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးနေမှာပါ” လို့ ယောကျ်ားလေး ဘက်က တွေးသွားတတ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ယောက်ျားလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ဖတ်တဲ့နေရာမှာ အလွန်ညံ့လို့ပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့နေရင်း ကိုယ့်ဘက်က မစောင့်နိုင် သည်းမခံနိုင်တဲ့အဆုံး ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ လမ်းခွဲသွားကြတဲ့ထိ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ယောက်ျားလေးဘက်ကတော့ ဘာကြောင့် သူ့ကိုလမ်းခွဲသွားတာလည်းဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းမှန်ကို သေချာမသိပဲ သူချစ်ရတဲ့သူတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီလို့ပဲ ခံစားသွားတတ်ကြပါတယ်။
အဲဒီမှာတင် နောက်ထပ် အဆင်ပြေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လည်း တွေ့ရော အရင်တုန်းက ချစ်သူကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ရသလိုမျိုး ထပ်အဖြစ်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီး တွဲပြီးသိပ်မကြာခင်မှာပဲ လက်ထပ်လိုက်ပါတယ်။ (ကိုယ်သင်ပေးလိုက်တာနဲ့ နောက်လူ ကောင်းစားသွားတာပေါ့လေ)
၅။ လက်မထပ်ပဲ အတူနေတာက လက်ထပ်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးနည်းပါး
စိတ်ပညာရှင်တွေက လက်မထပ်ရသေးပဲ အတူတူနေထိုင် (Living together) နဲ့ပက်သက်လို့ အမျိုးသမီးတွေကို အထူးသတိပေးလိုက်ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေဟာ သမီးရည်းစားဖြစ်ပြီး ၂၂ လ အတွင်းမှာ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းရင်တောင်း ဒါမှမဟုတ်လို့ ဒီအပိုင်းအခြား ကျော်လာပြီဆိုရင်တော့ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းနိုင်တဲ့ အလားအလာ ၂၀% လျော့သွားပါပြီ။
ရည်းစားသက်တမ်း ၃ နှစ်ကျော်လာတဲ့ထိ မတောင်းသေးဖူးဆိုရင် ၅၀% လျှော့လာပြန်ပါပြီ။ တွဲနေတာ ၇ နှစ်ကျော်ပြီဆိုရင်တော့ ဘယ်တော့မှ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သတိပေးထားပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ချစ်သူသက်တမ်းတွေ များလာတာဟာ တစ်နည်းအားဖြင့် ဂုဏ်ယူစရာကောင်းသလို တစ်ဖက်ကလည်း လက်ထပ်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေ နည်းလာပြီဆိုတာ သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ဖော်ပြပါအချက် ၅ ချက်ကတော့ မိန်းကလေးတွေအတွက် အချစ်ရေးမှာ နှလုံးသားနဲ့ ဦးနှောက်ရောယှက်ပြီး ပွင့်လင်းသင့်တာ ပွင့်လင်းဖို့၊ ရဲရင့်သင့်တာ ရဲရင့်ဖို့၊ အလိုမလိုက်သင့်တာ အလိုမလိုက်ဖို့ နောက်ဆုံးမှာ မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက် မကျန်ခဲ့စေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်တို့မှာလည်း ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေရှိကြမှာ မလွဲပါဘူး ဒါကြောင့်မို့ ယောက်ျားလေးတွေဘက်က လက်ထပ်ခွင့်မတောင်းတဲ့ အခြားအကြောင်းအချက်တွေရှိသေးရင် ဖြည့်စွက်ရေးသားခဲ့ကြပါဦးနော်..